Fahazoana tontolo iainana, karazana, fandrefesana ary tanjona | Fanavaozana maintso
Ny faharetan'ny tontolo iainana, ny karazany, ny refy ary ny tanjona
Daniel Palomino | | General, Trano maintso, Tontolo_iainana
Rehefa miresaka isika maharitra na maharitra Ao amin'ny ekolojia, dia fariparitanay ny fomba "maharitra" isan-karazany ny rafitra biolojika, manompo antsika ho loharano ary mamokatra amin'ny fotoana maharitra.
Izany hoe, miresaka isika fifandanjana karazany iray miaraka amin'ny loharanon-karena amin'ny tontolo iainana. Araka ny tatitry ny 1987 Brundtland miresaka ny tenantsika ho karazana dia mihatra amin'ny faharetana fanararaotana loharano ny ambanin'ny fetra fanavaozana voajanahary izany.
1 Karazana faharetana
1.1 Fahatokisana ara-politika
1.2 Fahazarana maharitra ara-toekarena
1.3 Faharetana amin'ny tontolo iainana
2 Fandrefesana ny faharetan'ny tontolo iainana
2.1 Fanondroana maharitra
2.2 Tondro fampisehoana tontolo iainana
2.3 Valiny telo
3 Tanjona fitohizan'ny tontolo iainana
3.1 Faharetana ao an-tranonao
4 Mampiavaka ny tanàna maharitra
4.1 Rafitra fampandrosoana sy fivezivezena an-tanàn-dehibe.
4.2 Fitantanana feno ny fako, ny rano ary ny fanadiovana.
4.3 Fitehirizana ny fananana tontolo iainana.
4.4 Mekanisma mahomby amin'ny angovo.
4.5 Drafitra fonenana manoloana ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro.
4.6 Kaonty ara-bola voalamina sy fifandraisana tsara.
4.7 Fanondroana tsara momba ny filaminan'ny olom-pirenena.
4.8 Fandraisana anjaran'ny olom-pirenena.
Ny fitohanana dia mitady filamatra iraisan'ny rehetra ary izany no maha-dingana sosialy-toekarena azy.
Izany dia nilaza fa afaka milaza isika fa misy karazana faharetana marobe.
Mizara indray ny fahefana politika sy toekarena, miantoka fa misy fitsipika tsy miova ao amin'ny firenena, manana governemanta azo antoka isika ary mametraka rafitra ara-dalàna miantoka ny fanajana ny olona sy ny tontolo iainana.
Mampiroborobo ny fifandraisana firaisan-kina eo amin'ny fiarahamonina sy ny faritra manatsara ny kalitaon'ny fiainana ary mampihena ny fiankinan-doha amin'ny vondrom-piarahamonina, ka mamorona rafitra demokratika.
Rehefa miresaka momba ity faharetana ity isika dia miresaka ny fahaizana miteraka harena amin'ny vola mitovy ary mety amin'ny tontolo sosialy samihafa, apetraka mponina avelao izy ireo ho tanteraka mahavita sy mamaha ny olany ara-bola manokana, izay afaka mampitombo ny famokarana sy manamafy ny fanjifana amin'ny sehatry ny famokarana vola.
Noho io antony io, raha mahay mandanjalanja ny faharetana, ity karazana faharetana ity dia fifandanjana eo amin'ny natiora sy ny olombelona, ​​ny fifandanjana izay mitady hanome fahafaham-po ny filàna ankehitriny nefa tsy mahafoy ny taranaka ho avy.
Faharetana amin'ny tontolo iainana
Ity karazana faharetana ity no zava-dehibe indrindra (hianarana amin'ny sehatry ny fampianarantsika tsirairay avy) sy ny tanjon'ny "famakafakana" ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tsy miresaka mihoatra ny kely noho ny fahaizana mitazona lafiny biolojika amin'ny famokarana sy ny fahasamihafana misy azy rehefa mandeha ny fotoana. Amin'izany no ahatanterahana ny fitehirizana ny harena voajanahary.
Mamporisika ity faharetana ity andraikitra mavitrika amin'ny tontolo iainana ary mampitombo ny fivoaran'ny olombelona amin'ny fikarakarana sy fanajana ny tontolo iainana onenany.
Fandrefesana ny faharetan'ny tontolo iainana
Ny fepetra maharitra dia karazana tontolo iainana na hafa, fepetra refy izy ireo amin'ny dingana fampandrosoana hahafahana mamolavola fomba fitantanana tontolo iainana.
Ny fepetra telo farany tsara indrindra anio dia ny Index Sustainability maharitra momba ny tontolo iainana, ny Index de ligne en environmental ary ny vokatra telo.
Ity dia index vao haingana ary fandraisana andraikitra avy amin'ny Global Leaders for Tomorrow Environmental Task Force of the World Economic Forum.
Ny Tondro maharitra maharitra ny tontolo iainana na Index maharitra maharitra ny tontolo iainana, raha fintinina ny esi, dia mari-pamantarana voatanisa, voarindra hierarchically, izay misy 67 variables ny lanja mitovy lanja amin'ny fitambarany (nifandimby namboarina ho singa 5, ary misy lafin-javatra 22).
Amin'izany fomba izany, ny Ny ESI dia manambatra tondro 22 momba ny tontolo iainana miainga amin'ny kalitaon'ny rivotra, ny fihenan'ny fako hatramin'ny fiarovana ireo iraisampirenena.
Ny naoty azon'ny firenena tsirairay dia zaraina ho 67 lohahevitra manokana kokoa, toy ny fandrefesana diôdiôma solifara amin'ny rivotra an-tanàn-dehibe sy ny fahafatesana mifandraika amin'ny toe-pahasalamana tsy madio.
Ny ESI dia manisa teboka afovoany dimy:
Ny toetry ny rafitry ny tontolo iainana isaky ny firenena.
Ny fahombiazana azo amin'ny lahasa amin'ny fampihenana ny olana lehibe amin'ny rafitra tontolo iainana.
Fandrosoana amin'ny fiarovana ny olom-pireneny amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana.
Ny fahaiza-manao ara-tsosialy sy andrim-panjakana izay tsy maintsy andraisan'ny firenena tsirairay andraikitra manoloana ny tontolo iainana.
Haavo fitantanana izay ananan'ny firenena tsirairay avy.
Ity dia index iray izay natambatra ho isa isa, mikendry ny "holanjaina" amin'ny harin-karena faobe sy ny Indeks fifaninanana iraisampirenena (ICI), mba hamenoana vaovao marobe, hitarihana tsara kokoa ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny famolavolana ary ny fampiharana ny politika.
Ny elanelam-piovan'ny tontolo iainana tafiditra ao dia feno tanteraka (fifantohana sy famoahana loto, kalitao sy habetsahan'ny rano, fanjifana angovo sy fahombiazana, faritra manokana ho an'ny fiara, fampiasana agrochemicals, fitomboan'ny isam-batan'olona, ​​fahitana ny kolikoly, fitantanana ny tontolo iainana, sns.), na dia ny mpanoratra aza dia miaiky fa misy fiovana mahaliana tokoa izay tsy misy fampahalalana.
Ny vaovao navoakany ny valiny voalohany amin'ity index ity dia toa mifanaraka amin'ny zavatra azo jerena amin'ny zava-misy, manana sanda ESI tsara indrindra firenena toa an'i Suède, Kanada, Danemarka ary Nouvelle Zélande.
Tondro fampisehoana tontolo iainana
Fantatra amin'ny fanafohezana sofina Ny tondro fampisehoana tontolo iainana dia fomba iray manisa sy manasokajy isa ny fanatanterahana tontolo iainana ny politikam-pirenena.
Ireo miova izay raisina ho kajikajy ny EPI dia mizara ho tanjona 2: ny maha-zava-dehibe ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana.
koa, mizara roa ny fahasalaman'ny tontolo iainana sokajy politika, 3 indrindra fa:
Ny vokatry ny kalitaon'ny rivotra amin'ny fahasalamana.
Fidiovana fototra sy rano fisotro.
Ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny fahasalamana.
Ary ny mivelona amin'ny 5 ny tanjaky ny tontolo iainana sokajy politika koa izay:
Harena voajanahary mahomby.
Biodiversité sy toeram-ponenana.
Ny vokatry ny fandotoana ny rivotra amin'ny tontolo iainana.
Miaraka amin'ireo sokajy rehetra ireo ary hahazoana ny valin'ny index dia isaina izy ireo Tondro 25 ho an'ny fanombatombanana mifandraika amin'izany (asongadina amin'ny sary etsy ambany)
Ny tsipika telo sosona na ny tsipika telo farany dia tsy misy afa-tsy a fe-potoana mifandraika amin'ny orinasa maharitra, manondro ny zava-bita nateraky ny orinasa iray naseho tamin'ny lafiny telo: ara-tsosialy, toekarena ary tontolo iainana.
Porofon'ny fahombiazana mifandraika amin'ny valiny telo Izy ireo dia miseho amin'ny tatitra maharitra na andraikitra ara-tsosialy.
Ankoatr'izay, fikambanana miaraka amin'i asa tsara Amin'ny teny kaonty, ny tsipika telo heny dia ho vokatr'izany fanamafisana ny tombony ara-toekarena sy ny andraikitra eo amin'ny tontolo iainana, ary koa ny fanamafisana na ny fanafoanana ny ivelany ivelany maharatsy azy, manasongadina ny andraikitra ara-tsosialin'ny fikambanana amin'ireo mpandray anjara, fa tsy amin'ireo tompon-tany ihany.
Tanjona fitohizan'ny tontolo iainana
Ny faharetana dia miatrika olana goavana eo amin'izao tontolo izao ankehitriny ary iray amin'izany no ilaina miloka (Ohatra tsy ampy) Ny angovo azo havaozina ohatrinona ny fanohanantsika ato amin'ity bilaogy ity.
Ary ny fihinanana herinaratra nentim-paharazana dia a akanjo tontolo iainana tsy ho azo averina intsony izany atsy ho atsy.
Noho io antony io no tanjona voalohany tokony hahatratrarana ny faharetana (ary ny tiako holazaina dia ny ankapobeny, fa tsy ny tontolo iainana fotsiny) mahaiza mamorona feon'ny fieritreretana manerantany.
Tokony ho takatsika fa misy ao amin'ny a planeta mifandrayNy zavatra ataontsika dia misy fiantraikany amin'ny hafa sy ny fanapahan-kevitra tsara na ratsy ataontsika dia hisy fiantraikany amin'ny zanatsika lahy sy vavy atsy ho atsy.
Tsikelikely dia mihalasa ny fahatsiarovan-tena satria fandraisana andraikitra tena tsara maro no hita any amin'ny firenena maro mba hampiroboroboana ny faharetana sahaza.
Ny tranga akaiky indrindra dia ny an'ny tetikasa Barcelona Smart City, izay ao amin'ny sokajy Barcelona + maharitra, dia namorona sarintany iaraha-miasa izay ihananan'ny vondrona fandraisana andraikitra maharitra rehetra ao an-tanàna. Fitaovana lehibe kokoa noho ny mahaliana mba hanarahana maso ireo hetsika rehetra hotanterahina.
Faharetana ao an-tranonao
Afaka misy faharetana ao an-tranonao ve?
Androany dia maro amintsika izay mikasa ny hanana trano maharitra, Mahafinaritra izy ireo satria mandray ny anton-javatra isan-karazany, toy ny orientany, ny angovo ampiasainy (indrindra ny masoandro), ny habaka malalaka izay ampidiriny ary ny fomba nitarihana azy ireo hisorohana ny fahaverezan'ny angovo.
Ireo fanatsarana rehetra ireo dia mahatonga azy io hahomby amin'ny angovo ary tsy handoto kokoa, ary misy izany miasa maharitra Azonao atao ny mieritreritra ny hanao mandritra ny fotoana maharitra mba handray anjara amin'ny fahasalamana eto an-tany.
Raha ny marina dia afaka mitsidika lahatsoratra 2 momba izany ianao maritrano biolojika tena mahaliana:
Mitsitsy angovo ao an-trano. Maritrano biolojika.
Maritrano biolojika. Ohatra iray amin'ny tranoko.
Mampiavaka ny tanàna maharitra
Tena mahafa-po ny fiainana ao anaty trano maharitra maharitra, fa raha mieritreritra ambaratonga lehibe kokoa isika, inona avy ireo toetran'ny tanàna maharitra?
Ireo tanàna antsoina hoe maharitra dia tsy maintsy manana ireto toetra manaraka ireto:
Rafitra fampandrosoana sy fivezivezena an-tanàn-dehibe.
Hajaina ny habakabaka sy ny faritra maitso; ny dia tsy maharitra (fitohanana azo zaka), ary miara-miaina mirindra ny fiara sy ny olona.
Mahomby ny fitateram-bahoaka ary mampiadana ny fitomboany ny fitaterana tsy miankina.
Fitantanana feno ny fako, ny rano ary ny fanadiovana.
Ny fako mivaingana dia angonina, sarahina, tehirizina araka ny tokony ho izy ary ahodiny mba hiteraka sanda ho an'ny isan-jato lehibe amin'izany.
Ny rano maloto dia tsaboina ary ahodina amin'ny loharano voajanahary, izay manalefaka ny fahasimban'ny tontolo iainana.
Ireto loharano (morontsiraka, farihy, renirano) ireto dia hajaina ary manana haavon'ny fidiovana ampy tsara ho an'ny olombelona.
Ny renirano an-tanàn-dehibe dia tafiditra am-pahavitrihana amin'ny fiainan'ny tanàna.
Fitehirizana ny fananana tontolo iainana.
Ny morontsiraka, ny farihy ary ny tendrombohitra dia voaro ary tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana ny tanàna, ka azo ampiasaina amin'ny fiainana sivika sy fampandrosoana ny tanàna.
Mekanisma mahomby amin'ny angovo.
Mampihatra teknolojia na fomba fiasa vaovao hampihena ny fanjifana herinaratra ireo tanàna ireo. Ho fanampin'izany, atoro anao amin'ny fampiasana angovo azo havaozina.
Drafitra fonenana manoloana ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro.
Ny faritra marefo ipetrahan'ny olona honenana dia ahena kokoa fa tsy ampitomboina, satria misy drafitra trano hafa ary azo ampiharina.
Kaonty ara-bola voalamina sy fifandraisana tsara.
Misy ny kaonty mazava sy mangarahara, mitombo ny fidirana amin'ny Internet, ampy ny hafainganan'ny fifandraisana ary mifindra mankamin'ny fanaovana nomerika ny asam-panjakana ny olona.
Fanondroana tsara momba ny filaminan'ny olom-pirenena.
Mahatsapa ny mponina fa afaka miara-miaina am-pilaminana izy ireo satria mihena ny trangana asan-jiolahy sy ny asan-jiolahy ary mirona amin'ny ambaratonga ambany.
Fandraisana anjaran'ny olom-pirenena.
Ny vondrom-piarahamonina dia mampiasa loharanom-pifandraisana, toy ny rindranasa finday, hiadian-kevitra momba ny famahana ny olana amin'ny fanatsarana ny tanàna.
Ny fiarahamonim-pirenena sy ny sisa amin'ireo mpisehatra eo an-toerana dia voalamina mba hanan-kery amin'ny hetsika isan'andro amin'ny fiainan'ny tanàna.
Avelako amin'ity sary farany ity ianao amin'izay ahafahanao mijery hoe iza ireo tanàna maharitra indrindra ary iza no kely indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Ny faharetan'ny tontolo iainana, ny karazany, ny refy ary ny tanjona